पेशल आचार्य – Page3– मझेरी डट कम
माइक्रो बस सहरमा
माइक्रो इकोनोमिक्स बजारमा
माइक्रो बायोलोजी हजारमा
सर्मसर्म मैँ मर्म पार्छ ।।
पार्टीका कार्यकर्ताजस्तै हुन्
साना हुन्जेल –मर्छन् भन्ने डर !
हुर्केपछि –मार्छन् भन्ने डर !!
पितृलाई हेला गरेर
दातृलाई हेलो गर्ने
भन्नलाई चाहिँ जनतन्त्र भन्ने
व्यवहार मङ्की स्टेटको गर्ने ?
चिठी लेखेपछि त्यसलाई टाँस्न गम चाहिन्छ,
हामी नेपाली भीरपाखा खोस्रर बाँच्छौं
कहाँ ट्याङ्क, गोला र बमको कुरा
गरिब हाँस्न त मिठो आलुदम चाहिन्छ ।